Ny JWAT145 indostrialy an-telefaona an-tariby an-telefaona an-tariby dia napetraka tao Switzerland-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Ny telefaona an-tariby an-tariby JWAT145 Industrial vandal proof dia napetraka tany Suisse
FIAINANA: 2021-07-28 HITS: 4
Ny telefaona an-tariby an-tariby JWAT145 Industrial vandal proof dia napetraka tany Suisse.
Ny mpanjifa Soisa dia nametraka ny Telephone proof vandal proof v Telephone fa tsy ny telefaonin'izy ireo any amin'ny hotely ary nahazo tambiny tsara avy amin'ny mpanjifanay izahay.
Ny finday miketrika JWAT145 an'ny indostrialy dia miorina mafy, henjana ary azo ianteherana haharitra amin'ny toe-javatra manokana manerantany. Ity telefaona ity dia vita amin'ny vy vy SUS304, miaraka amin'ny tanjaka mekanika avo lenta ary ny fanoherana mahery vaika. Ny handset dia miaraka amina tadin'ny vy mifono vy izay mahazaka tesion misintona avo. Misy ny kinova Analog misy fenitra na kinova VOIP SIP. Ity telefaona Anti-vandal ity dia azo ampifanarahana amin'ny ankamaroan'ny rafitra PABX, PBX, PAX na IP PABX.
Joiwo dia manome serivisy ho an'ny tetikasa indostrialy.
Ianao ve mitady telefaona vonjy maika porofo manimba indostrialy ho an'ny tetikasa?
Ampidiro ny injeniera indostrialy plastika azo antoka amin'ny toetrandro JWAT904